ရေချိုးခြင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ - Hello Sayarwon
ရေချိုးတာက တစ်နေ့တာတိုင်းမှာ လုပ်သင့်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုတွေထဲကတစ်ခုနော်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဆိုတာနဲ့ တစ်နေ့တစ်ခါမဖြစ်မနေရေချိုးဖို့လိုလို့လား။ ရာသီဥတုအေးနေလို့ ရေမချိုးတာကောင်းမယ်။ နေမကောင်းရင်တောင် ရေချိုးမှဖြစ်မှာလား ဆိုပြီး ရေချိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ခေါင်းထဲမှာ ..လား….လား..ပေါင်းစွာနဲ့ မေးခွန်းထုတ်မိနေတာလေးတွေရှိရင် ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ကြည့်နော်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ တစ်နေ့ကို ရေတစ်ကြိမ်ချိုးရင်လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညစ်ပေတဲ့အရာတွေကို ထိတွေ့မိတာမျိုး၊ နံစော်နေတာမျိုး နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရေချိုးတာကို မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုမှာပါ။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေတစ်ကြိမ်၊ အများဆုံး ၂ ကြိမ်အထိချိုးလို့ရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်တော့ ရေချိုးပေးတာက ကောင်းတဲ့အလေ့အထတစ်ခုပါ။
ဘာကြောင့် ရေချိုးပါလို့ ပြောရတာလဲ…………
ရေချိုးတာက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ပါ။ ရေချိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ရေအေးနဲ့ရေချိုးတာ၊ ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲရေချိုးချိုး အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးပေးတာက အချိန်အကြာကြီးချိုးရင် အသားခြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ရေချိုးတာက အသားအရေကိုကြည်လင်စေပြီး အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်တွေကို သန့်စင်စေနိုင်သလို အရေပြားဆဲလ်တွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ အရေပြားမှာ ကပ်တွယ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ မှိုပိုးတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးလို့ အရေပြားပြဿနာတော်တော်များများကနေလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာ အသေအချာပါ။
ဘယ်ရာသီဖြစ်ဖြစ် ရေချိုးရမယ့်အကြိမ်ရေကအတူတူပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့အချိန်မှာ ချွေးထွက်များတာကြောင့် ရေတစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လောက်ချိုးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆောင်းတွင်းနဲ့မိုးတွင်းလိုမျိုး အေးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဆိုလုံလောက်ပါတယ်။ မိုးရေစိုလာရင်တော့ ချက်ချင်းရေချိုးတာ ခြေလက်ဆေးကြောတာတွေလုပ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါမယ်။
ရေချိုးတဲ့အခါ ရေချိုးလို့ပြီးရင် ပြီးရောဆိုပြီးချိုးလိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒီအချက်လေးတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။
ရေချိုးတဲ့အခါ ရေချိုးချိန်ကို ၅ မိနစ် ကနေ ၁၀ မိနစ်အတွင်းပဲထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အသားအရေခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်။
ရေပူကိုမသုံးပါနဲ့။ ရေအေးနဲ့စပ်ပြီးချိုးပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း ရေအေးနဲ့ပဲချိုးပေးပါ။ ရေအပူချိန်ကလည်း အရမ်းမြင့်ရင် အသားခြောက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆပ်ပြာအပြင်းစားတွေမသုံးပါနဲ့။ အနံ့အသက်နဲ့ရောဂါပိုးတွေကင်းစေဖို့က ခပ်ပျော့ပျော့ဆပ်ပြာနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်။
ရေချိုးပြီးတိုင်း ရေခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ ရေချိုးပြီး ရေခြောက်အောင်သုတ်တာက အသားခြောက်နိုင်ခြေကို ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းကထွက်လို့ ၃ မိနစ်အတွင်းမှာ အရေပြားကို အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်လိမ်းပေးပါ။ ဒါမှ အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်အလိုက် ကွာခြားသွားတဲ့ရေချိုးရမယ့် အကြိမ်ရေ
မွေးကင်းစ ကနေ ၅ နှစ်အထိ ဘေဘီလေး
မွေးကင်းစကနေ ၅ နှစ်အထက်ကလေးတွေကို နေ့တိုင်းမဖြစ်မနေရေချိုးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မွေးကင်းစလေးတွေဆိုရင် တစ်ပတ်မှာ ၂ ကြိမ်လောက်ဆိုရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်။ ၁ နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ပါ။ ဒီလိုကနေ ၃ နှစ်ခွဲလောက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လောက်ချိုးပေးလို့ရပါပြီ။ ရာသီဥတုအေးရင်​တော့ ရေနွေးလေးနဲ့စပ်ပြီး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့။
၆ နှစ် ကနေ ၁၁ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်
သူတို့လေးတွေကတော့ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ် ကနေ နှစ်ကြိမ်လောက်အထိချိုးလို့ရပါပြီ။ ရေကိုအကြာကြီးမချိုးဖို့တော့ သတိထားပေးပါ။ ရာသီဥတုအေးရင်​တော့ ရေနွေးလေးနဲ့စပ်ပြီး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့။ ဒီအရွယ်မှာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးဂရုစိုက်တတ်ဖို့လည်း သင်ပေးရပါမယ်။
ဒီအရွယ်ကတော်တော်လေးလှုပ်ရှားမှုများတဲ့အရွယ်ပါ။ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လောက်ရေချိုးတာက အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးချိန်တွေ၊ ကျောင်းသွားရမယ့်အချိန်မျိုးတွေမှာ ရေချိုးခိုင်းပါ။
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မပြတ်တမ်းလုပ်နေရတဲ့ဒီအချိန်မှာ စမတ်ကျကျလှပဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်ရေချိုးဖို့လိုသလို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အခြားသောအချက်တွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့ ရာသီဥတုအရမ်းအေးမနေဘူးဆိုရင် တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လောက်တော့ရေချိုးပေးတာကောင်းပါမယ်။
ဒီအရွယ်မှာ ငယ်ငယ်ကလောက် ကျန်းမာဖျတ်လတ်မှုမရှိတော့တာအမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် ရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှရေချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တာက ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲရေချိုးပေးပါ။ အရမ်းအေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ရေမချိုးပါနဲ့။ ရေစိုဝတ်နဲ့ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
လုပ်ကိုင်ရတဲ့အလုပ်အိုင်ကလည်း ရေချိုးရမယ့်အကြိမ်ရေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်က ညစ်ပေတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေများတဲ့ အလုပ်အကိုင်မျိုးကိုလုပ်ကိုင်နေရမယ်ဆိရင်တော့ နေ့စဉ်ပုံမှန်ရေချိုးဖို့ မပျင်းသင့်ပါဘူး။ ဆပ်ပြာကိုသုံးပြီးရေသေချာချိုးလို့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါ။
What’s the best shower frequency? https://www.medicalnewstoday.com/articles/324682.php Accessed Date 10 December 2019
How Often Should You Shower? https://www.verywellhealth.com/how-often-should-you-shower-4154629 Accessed Date 10 December 2019